Carbon steel biibiile bir aan xuduud lahayn / biibiile dareere / sare, cadaadis hoose iyo dhexdhexaad ah tuubo kululeeyaha / batroolka dillaaca batroolka / beebka bacriminta
Carbon biibiile aan xuduud lahayn waa nooc ka mid ah biibiile bir dheer. Biibiilaha birtu wuxuu leeyahay qayb godan, oo si weyn loogu isticmaalo daabulka dareeraha, sida saliidda, gaaska dabiiciga ah, biyaha iyo qaar ka mid ah qalabka adag. Gaadiidka dareeraha ah ee leh shuruudaha cadaadiska, marka lagu daro hubinta xoogga iyo adkaanta buuxisa shuruudaha u dhigma, waxaa sidoo kale looga baahan yahay in la hubiyo cidhiidhiga, taas oo ah, tijaabada hidde -sidaha waa in mid mid loo sameeyaa ka hor intaan warshadda laga bixin.
Daawaha hoose ee xoogga sare /Tuubooyinka birta aan xuduud lahayn ee ujeeddooyinka dhismaha
Marka la barbardhigo birta adag sida birta wareegsan, tuubada birta aan xuduudka lahayn ee qaab -dhismeedku waxay leedahay isla foorarsiga iyo torsionka iyo miisaanka fudud. Waa nooc ka mid ah birta qaybta dhaqaalaha, taas oo si weyn loogu isticmaalo soo saaridda qaybaha dhismaha iyo qaybaha farsamada sida tuubada daloolinta saliidda, usheeda dhexe ee gudbinta baabuurta, jir baaskiilka, dhismaha biraha dhismaha, iwm Waxay u baahan tahay oo kaliya xoog iyo adayg, dhuumaha dhuuban
Dhuujinta kulul dhuunta galvanized biibiilaha birta dareeraha cadaadiska hoose Q235 A106 A53
Dhuumaha galvanized welded wuxuu u qaybsan yahay galvanizing kulul iyo galvanizing qabow. Dhumucda lakabka galvanizing dhuuqidda kulul, qiimaha jaban ee galvanizing, dusha sare ma aha mid aad u siman. Ogsijiin afuufaya biibiilaha alxanka: waxaa loo isticmaalaa samaynta birta iyo afuufidda oksijiinta. Guud ahaan, waa dhexroor yar oo biibiile bir ah oo leh 8 tilmaamood oo ah 3 / 8-2 inji. Waxay ka samaysan tahay 08, 10, 15, 20 ama 195-q235 strip steel. Si looga hortago daxalka, waa inuu ahaado aluminium.